टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को एक गहन सिंहावलोकन | AASraw
/ब्लग/ग्यालरी/टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को एक गहन सिंहावलोकन
प्रकाशित 11 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young मा लेखियो ग्यालरी.
संसारमा स्टेरियोड्सहरू ई-चीज भएका छन् र सबैलाई उनीहरूको शरीरका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गर्दै सबैलाई टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको बारे थप जान्न आवश्यक छ। हामी यस स्टेरॉयड को बारे मा धेरै स्टेरॉयड को बारे मा चर्चा गर्नेछं कि टेस्टोस्टेरोन खुराक, कसरि टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, कसरि टेस्टोस्टेरोन ओवरडोज संग सम्झौता गर्न को लागी, अन्य को बीच टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट समीक्षाहरु। तपाईंले जो गर्न सक्नुभयो हामी टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको संसारमा बस्छौं।
उत्तम साइटको बारे सोच्दै टेस्टोस्टेरोन Cypionate onlin खरीद गर्नुहोस्e? AASraw.com उत्कृष्ट छनौट हो। हामी एक चीन आधारित उद्यम हो जुन विनिर्माण, मार्केटिंग, र सक्रिय दबाइ मध्यवर्तीहरु को वितरण र टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट समेत उत्पादनहरु मा वितरण गर्दछ।
त्यसैले टेस्टोस्टेरोन के साइप्रियोटेट भनेको हो?
टेस्टोस्टेरोन एक anabolic स्टेरॉयड हो जुन बजारमा संश्लेषित हुने पहिलो थियो। अर्कोतर्फ, टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट टेस्टोस्टेरोन यौगिक हो जुन धीरे-धीरे कार्य गर्दछ, एक लामो-एन्सर र तेल-आधारित इन्जेक्सबल। यो हाइपोगोनदवाद को उपचार गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ जो शरीर मा टेस्टोस्टेरोन मा कमी छ जो मान्छे मा विभिन्न सम्बन्धित समस्याहरु को कारण बनता छ।
चिकित्सकले तपाईंलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा पछि पर्चे ड्रगको रूपमा, तपाइँ आफ्नो घरको सान्त्वनामा तपाइँ आफैले आफैंलाई दिन सक्नुहुन्छ। सौभाग्य देखि यो आत्म-इंजेक्शन हो, र यसले यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँछ। यो यसको सामान्य फारममा पनि प्राप्त योग्य छ।
टेस्टोस्टेरोन पहिलो 1935 मा निर्मित गरिएको थियो, र दुई वर्षपछि यसलाई औषधी औषधिको रूपमा बजारमा रिहा गरियो। पहिलोमा, यो छर्रों प्रपत्रमा उपलब्ध थियो र पछि एस्टेरको रूपमा रहेको थियो जुन टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको रूपमा एक इन्ट्रामुसेलुलर इंजेक्शन हो।
Methyltestosterone, सिंहासन गर्न पहिलो एनाबिक स्टेरियोड्स मध्ये एक 1935 मा रिलीज गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश, यो hepatotoxicity संग जोडिएको थियो, र यसको कारण यो अप्रचलित भयो। लामो-अभिनय टेस्टोस्टेरोनको अनुमानले टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट बजार-माईएनएमक्सक्समा बजारमा उपजेन भनिन्छ। वास्तवमा यो डेपो-टेस्टोस्टेरोन नामको नाममा बेचेको थियो र अझै पनि त्यही नामको साथ लोकप्रिय छ।
ओजुन पचास वर्ष भन्दा पहिले डिपो टेस्टोस्टेरोनको उत्पादनमा संलग्न भएको छ जुन यो सुरु भएको थियो। टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट टेस्टोस्टेरोन एनाथेट को धेरै बडी बहादुरी र एथलीटहरूको लागि उपयुक्त छ। दुबै समान छन्, तर तिनीहरूका आधा जीवन फरक छन्।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट एनाबोलिक स्टेरियोड्स मध्ये एक थियो जुन 1970s मा एक औषधि को रूप मा प्रयोग को स्वीकृति मिलयो। त्यसपछि यो FDA द्वारा मात्र टेस्टोस्टेरोन प्रतिस्थापन उपचारमा प्रयोग गर्न निर्दिष्ट गरिएको थियो। वर्षौंमा, यो प्रयोग रोकिएको छ किनकी यो बालबालिका र महिलाहरुको लागि उपयोगको लागि उपयुक्त छैन। 200mg साप्ताहिक खुट्टामा लिने क्रममा टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट पुरुष जन्म नियन्त्रण लागू औषधिको रूपमा पारित गरिएको छ।
के लागि प्रयोग हुने टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट के हो?
टेस्टोस्टेरोन Cypionate हाम्रो जीवनमा प्रयोगको सरणी छ। यहाँ यो अनुप्रयोगहरू छन्।
फिटनेस संसारमा, सबैलाई सधैं उत्तम हुन प्रयास गर्ने छ। चाहे तपाईं भारोत्तोष वा एक खेलाडी हुनुहुन्छ, तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ कि कहिलेकाहीं प्रतिस्पर्धामा तीव्र हुन सक्छ। आत्म-सन्तुष्टि भन्दा अन्य कि विजेताको साथमा, एक पदकलाई सम्मानित वा व्यावसायिक टोलीमा स्पेस सुरक्षित गर्नु धेरैको लागि सबैभन्दा बहुमूल्य कुरा हो। तपाईंको जीवनमा यस्तो उपलब्धिहरू तपाईंको शरीरको आधारमा एक दश वा बढी लिन सक्छ। तर सुसमाचार टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट जस्तै प्रदर्शन-बढ्दो औषधि हो कि तपाईंले आफ्नो फिटनेस लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसैले किन यो औषधि फिटनेस गुरुङमा यति मनपर्छ? तिनीहरू मांसपेशिहरु ठूलो बनाउँछन् र एकै समयमा तपाईं सत्रको समयमा हुन्छ कि मांसपेशी क्षति को मात्रा कम गरेर एक कडा कसरत बाट छिटो पुनः प्राप्त गर्दछ। यसबाट फाइदा हुन्छ कि एथलीटहरूले अत्यावश्यक र नियमित रूपमा प्रशिक्षित गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट मांसपेशी गुणस्तर र शक्ति कायम राख्न मद्दत गर्दछ। यसले हड्डी बल र घनत्वलाई पनि संरक्षण गर्दछ। अर्को ठूलो कुरा यो हो कि तपाई सधैँ आफ्नो प्रशिक्षण सत्रको लागि सँधै यो औषधिले तपाईंको कसरतलाई सुदृढ पार्ने र सक्षम बनाउनेछ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट चयापचय गतिविधि को सुधार मार्फत वसा हानि बढाउँछ। यो स्टेरॉइड यो एन्ड्रोजन रिसेप्टरलाई बाध्यतापूर्वक बाँधेर यो गर्न को लागी बोसो को बिरुवा र नयाँ मोटो कोशिकाहरु को गठन को रोकन को लागी बाध्य गर्न को लागी सक्षम छ।
यसले शरीरमा पोषक तत्व दक्षतालाई पनि बढाउँछ। यसले मांसपेशी छिटो बनाउँछ त्यसैले तपाईले थप खाना खाने खानुपर्छ किनभने बढी मांसपेशिहरु को विकास गर्न को लागी बोसो को रूपमा भण्डारण गर्नुको लागी प्रयोग गरिन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को एन्ड्रोजन प्रतिस्थापन थेरेपी मा प्रयोग गरिन्छ। हाल, यो एफएडी द्वारा हाइपोगोनडोट्रोपिक र प्राथमिक हाइपोगोनडवाद को लागी अनुमोदित हुन्छ (या तो प्राप्त या जन्मजात)। यो अवस्था एक विकार हो जसको कारण पुरुषहरूले पर्याप्त सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न सक्षम छैनन्। ती दुवैबीच के फरक छ?
Hypogonadotropic hypogonadism- यो दिमाग हुन्छ जब मस्तिष्कका केही भागहरू (पिट्यूटरी ग्रंथि वा हाइपोथोममस) जसले टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न परिक्षाहरूसँग सम्पर्क गर्दछ।
Nandrolone पाउडर के लिए / nandrolone फायदाहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ?
प्राथमिक hypogonadism- यो हुन्छ जब टेबुलहरू पर्याप्त टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न असमर्थ छन्।
जब एक व्यक्ति यसबाट पीडा भइरहेको छ; कम सेक्स ड्राइव, erectile dysfunction (निर्माण को प्राप्त गर्न र बनाए राखन), गरीब एकाग्रता र मूड परिवर्तन। यसले पनि एनीमिया, मांसपेशी जन र शरीरको कपाल, जुनेकोमास्टिया (छातीको विकास) को कमी हुन सक्छ र आधा र लिंग दुवैको विकास घटाउन सक्छ। तथापि, पुरुषहरूमा ढिला-सुरु हेल्गोगोनडियावादको उपचारमा यसको सुरक्षा अझै पुष्टि भएको छैन।
यसबाहेक, यो ओस्टियोपोरोसिस, ट्रांसगेंडर नर, ओलिलोसपेरिया (कम शुक्राणु गणना भएको) मा हार्मोन प्रतिस्थापन थेरेपी को उपचार गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ, पुरुष तकरीबन, स्तन विकार र स्तन कैंसर को देरी।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट कसरी काम गर्दछ?
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट एक endogenous androgens मध्ये एक हो जो पुरुष यौन अंगहरु को विकास मा शामिल छ। यो माध्यमिक सेक्स विशेषताहरु को संरक्षण मा पनि एड्स। तिनीहरू मोटो वितरण, शरीरको मापनमा परिवर्तनहरू, वाहल कर्ड मोटाई, लारीज वृद्धि र प्रोस्टेट विकास र परिपक्वता समावेश गर्दछ।
यो ड्रगमा टेस्टोस्टेरोनको रूपमा समान गुणहरू छन्, तर लाभ यो छ कि यसको लामो आधा जीवन र रिलीज दर छ। यसको प्रशासनको 24 घण्टाभित्र, यसले टेस्टोस्टेरोन स्तर बढाउँछ 400% सम्म। प्रशासनको पछि अर्को तीन देखि5दिनको लागि एन्ड्रोजन स्तर उच्च हुन सक्छ। एकपटक त्यहाँ यो औषधीको आन्तरिक प्रशासन हो भने, यो स्थानीय सुमन र झुकावको कारण लिबिया र मूडमा हुनसक्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट दुई फरक तरिकामा काम गर्दछ। पहिले केहि एस्ट्रोजन रिसेप्टर को सक्रियण पछि estradiol को रूपांतरण मार्फत छ। यो पनि एन्ड्रोजन रिसेप्टर सक्रियता को माध्यम ले काम गर्दछ।
यो एक अनुमानित एनालिलिक हो यसैले यो अत्यधिक वसा को घुलनशील छ। टेस्टोस्टेरोन र यसको एन्जिस्टर इंजेक्शन को माध्यम ले प्रशासित हुनु पर्छ किनकी उनि मौखिक रूप देखि जब जिगर द्वारा चाँडै निष्क्रिय हुन्छन्।
एकपटक त्यहाँ यो औषधिको भित्री प्रशासन हो, यसको वितरणको मात्रा 1 एल / किलोमिटर वरिपरि छ।
जब अवशोषण हुन्छ, दबाइ प्रसोधन गर्न रक्त परिसंचरणमा पुग्छ। परिमार्जनमा, यसको 40% प्लाज्मा ग्लोबिनमा बाँध्छ जबकि यो 2% अनबाउन्ड छोडिन्छ वा एल्बमिन सहित अन्य प्रोटीनहरूसँग संलग्न छ।
यो औषधि काम सुरु गर्न को लागि, यो एंजाइमहरु द्वारा संसाधित गर्नु आवश्यक छ। उत्प्रेरक को काम टेस्टोस्टेरोन र यस अणु को एस्कर को बीच बंध को तोडना छ। टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटसँग एक लामो प्रसोधन समय भएकोले यसको यसको आकारको ठूलो साइजको कारण। एकपटक विभाजन भएपछि, टेस्टोस्टेरोन बिस्तारै 17 क्यास्टोस्टरोइड्समा छ। यो दुई माध्यमबाट, मार्ग मार्गको विपरीत। Dihydrotestosterone र estradiol प्राथमिक सक्रिय चयापचय हो। टेस्टोस्टेरोन ईआरजेनेटल पथ, लिभर र छालामा DHT मा तोडिएको छ। Dihydrotestosterone अगाडी बढ्यो androstanediol मा छ।
दिईएको टेस्टोस्टेरोन खुसीको 90% intramuscularly उल्लेखित गरिन्छ ग्लुरोरोनिकको रूपमा, टेस्टोस्टेरोनको सल्फरिक एसिड conjugates र यसको मेटाबोलाइट। बाँकी टेस्टोस्टेरोनको 6% असंगत रूपमा फारममा आम रूपमा मल हटाइयो।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियननेट आधा-जीवन सबैभन्दा लामो समय हो किनभने यो लगभग आठ दिन हो।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटका लागि हाइलाइटहरू
पुरुषहरूमा हाइपोगोनदवादको लक्षणहरूको उपचारमा टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट प्रयोग गरिन्छ। यो हालत पर्याप्त सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न शरीरको असक्षमताको बारेमा ल्याइन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट समाधान को रूप मा उपलब्ध छ जुन इंजेक्शन छ। यो मांसपेशी मा प्रशासित हुनुपर्छ, र यसको बारे सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ यसलाई आफ्नो डाक्टर संग कसरी गर्ने भनेर छलफल गर्न पछि आफ्नो घरको आराममा यो गर्न सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट समाधान दुर्व्यवहार र ब्रान्ड नाम दुर्व्यवहारको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। ब्रान्ड नाम डिपो टेस्टोस्टेरोन हो।
शरीर निर्माणको लागि टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको प्रभाव
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट प्रयोग गर्ने जो कोहीले शरीरलाई दिईने राम्रो नतिजालाई समेट्न सक्छ। यसको शक्तिले बजारमा शीर्ष स्टेरियोड्सको रुपमा मानिन्छ। साथै, यो छिटो र प्रभावकारी परिणाम प्रदान गर्दछ।
एक पटक तपाईंले बारह हप्ताको लागि प्रयोग गर्नुहुँदा, तपाईंसँग हुनेछ;
वृद्धि भएको मोटो हानि क्षमता। यो एस्ट्रोजनको दमन हो।
यो उपग्रह सेल प्रकार्य को बढावा गरेर मांसपेशियों को तेजी देखि मरम्मत गर्दछ।
नाइट्रोजन अवधारणद्वारा, यसले तपाईंलाई ठूलो मांसपेशी लाभ दिन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेटले तपाईंको बल बढाउँछ।
साथै, टेस्टोस्टेरोनले अन्य हार्मोनको प्रभावलाई रोक्छ जुन एक काटने चरणको समयमा मांसपेशीको क्षति बढाउन सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को साइड इफेक्ट
आश्चर्यजनक कुरा, यो दबाइले दुलहीपन गर्दैन। टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट साइड इफेक्टबाट तपाईले धेरै पीडित हुन सक्नुहुनेछ, सुसमाचार यो हो कि उनि व्यवस्थित हो।
सबैभन्दा साधारण साइड इफेक्ट हुन्;
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको मुँहासे प्रयोगले पिमलेसको कारण हुन सक्छ। यो समस्याग्रस्त हुन सक्छ, तर तपाईले तथ्यलाई प्रेम गर्नेछ कि प्रभावकारी उपचार उपलब्ध छ। ग्लिककोल एसिड, बान्जायोल पेरोक्साइड, र मसालेदार एसिड जस्ता तार्किक उपचार हल्का र मध्यम मुँहासेको उपचारको लागि उपयुक्त हो। तपाईंले सफा छाला प्राप्त गर्न राम्रो अनुहार स्वच्छता र अभ्यासहरू पनि राख्नुपर्दछ।
कपालको वृद्धि - यो औषधिले प्रायः अप्रत्याशित क्षेत्रहरूमा बालको विकास हुनसक्छ। यदि तपाईं अत्यन्तै शरीर वा अनुहारको बाल्यकालमा पीडित हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ केही तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यसलाई कम गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो एक बिजुली शेवर वा रेजर प्रयोग गरी शेन को माध्यम ले छ। यदि यो हिसाबले अक्सर तपाईंलाई रेजर जलाइदिन्छ, तपाइँ एक सुखदायक क्रीम खरिद गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं रूटबाट कपाल पटाउन धागे वा टिम गर्न सक्नुहुनेछ। कालो अर्को जरा बाल बाट छुटकारा पाउने तरिका हो। डिपिलाटरीरीहरूको रूपमा चिनिने बलियो रसायनहरूको प्रयोगले तपाईंलाई ठूलो सौदा मदत गर्न सक्छ, तर यदि तपाईसँग संवेदनशील छाला छ भने, तपाइँले यसलाई सानो स्थानमा जाँच गर्नुपर्छ। अत्यधिक कपालको विरोध गर्ने अन्य तरिकाहरू दबाइ, लेजर कपाल हटाउने, र इलेक्ट्रोलीयिसको प्रयोग गरी हुन्छन्।
इंजेक्शन साइट मा सुँगुर र दुखाइ - तपाई लाई परेशान हुन को लागी छैन किनकि तपाईंले इंजेक्शन साइट मा दुखाइ वा सुँगुरको सामना गर्नु भएको छ। यदि तपाईं पहिले एक शट भएको छ भने, तपाईंले पहिले नै भन्न सक्नुहुन्छ कि केहि दिन को लागि यदि दुखाइ सामान्य हुन्छ। यो कम गर्न, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं इन्जेक्शन क्षेत्र सार्नुहुन्छ। यदि तपाईं गतिहीन रहनु हुन्छ भने, क्षेत्रले अधिक चोट पुर्याउन सक्छ। दुखाइ व्यवस्थित गर्न, तपाईं दुखाइ र सुँगुर संग मद्दत गर्न को लागि दुखाइ रिलायभर्स लिने विचार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भए एक अर्काको ज्यान गएको छ। तथापि, तपाईले ध्यान दिंदा एकपटक डाक्टरको ध्यान खोज्नु पर्दछ कि पीडा वा सुँगुर 48 घण्टा भित्रमा जम्मा हुँदैन।
Gynecomastia (छाती को बढावा) -तपाईंको यो औषधि प्रयोग गरिसकेपछि तपाईंको छाती ठूलो हुन्छ। त्यो धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन; निम्न सल्लाहहरू काममा आउनेछन्। पहिलो कम्प्रेसन शर्टहरू प्रयोग गर्दैछ। यो एक उत्कृष्ट छनौट हो किनकि यो बटुलेमा सजिलो छ र प्रभावकारी ढंगले स्तनको उपस्थिति कम गर्दछ। तपाईंले उच्च-तीव्रता अन्तराल प्रशिक्षण (HIIT), push-ups, dumbbell incline press, र seated row जस्तै केही gynecomastia अभ्यासहरू पनि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। सूजन स्तनको उपस्थिति कम गर्न, मांसपेशिहरु निर्माण गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले ठूलो छाती कम घोषणा गरेको छ। र चर्को कारणले सूजन को बढावा दि्छ, तपाईले फैटी फूड्सबाट बच्न र स्वस्थ बोसो जस्तै जामुन, पत्तेदार चिसो, चिसो मासु र मीठो आलु खानुपर्छ। जिनेकोमास्टियाको दुरुपयोग गर्न अर्को तरिका एक शल्यक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ जुन स्तन क्षेत्रमा वसा हटाउनेछ।
अधिक नियमित erections- erections हुनु सामान्य छ, तर अवांछित व्यक्तिहरु एक बिट विनाशकारी हुन सक्छ। यो टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट प्रयोग गरेर तपाईंलाई रोक्न हुँदैन। तपाईं सँधै कुनै असामान्य निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको बाटो आउछ। अहिले सम्म तपाइँ यसलाई कसरी गर्ने भन्ने बारे आफैलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। एक पल्ट यो हुन्छ, तपाईंलाई महसुस गर्न को लागी छैन कि संसार तपाईं क्रश हुँदै हुनुहुन्छ; तल बस्नुहोस्, ढिलो सास र शांत रहनुहोस्। यसको साथमा शर्मिलापन घटाउन को लागी, तपाइँ ल्याप्टप, शर्ट वा जैकेट प्रयोग गरेर निर्माणलाई आवरण गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेट गर्न आवश्यक छैन, सबैलाई यो अनुभव गर्दछ र अधिकतर कसैले कसैलाई थाहा पाएको छैन। तपाईं पनि मनन गर्न, प्रयास गर्नुहोस् र आफैं विचलित गर्न सक्नुहुनेछ, ठंडे स्नान लिनुहोस्, न्यानो नारो वा जोगिंग जस्तै सज्जन अभ्यास गर्नुहोस्। यो तथापि सिफारिस गरिएको छ कि यदि खण्ड दर्दनाक हुन्छ भने तपाईंले डाक्टरको ध्यान खोज्नुपर्छ।
अर्काहरू सामान्य भन्दा लामो समयसम्म रहन - एक चार घण्टा वा बढीमा रहनु भएको निर्माण अधिक छैन। टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटले यो कारण हुन सक्छ, र तपाईं यो क्षेत्रमा बर्फ प्याकेज राखेर यो सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यससँग, एक मजबूत निर्माण एक मिनेट मा जान सकिन्छ। डाक्टरले यो सम्झौता गर्न तपाईंलाई गोलहरू वा इंजेक्शन पनि दिन सक्छ।
एक सिरदर्द - एक टाउको दुखाइ टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको प्रयोग गरेर ल्याउन सकिन्छ। यो काम गर्न, ड्राइभ वा तपाईंको टाउको दुखाइ संग कुराकानी गर्न गाह्रो हुन सक्छ तर तपाईं बिस्तरमा रहन भन्दा बढि काम गर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि जाने पर्खनुहोस्। तपाईं एस्पेरिन, नेपरोक्सन, इबोप्रोफेन, र एसिटामिनोफेन जस्तै ओभर-द-काउन्टर दुखाइ रिलिभर्स लिने प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले निम्न सल्लाहहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुको पीडाको सामना गर्न सक्दछ। आफ्नो आँखा बन्द गर्नुहोस् र बाकी लिनुहोस्। तपाईं पनि आफ्नो मन्दिर र तपाईंको गर्दन मालिश गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि सल्लाहकारी छ कि तपाईं आराम र खोपड़ी र गर्दन क्षेत्रको वरिपरि न्यानो कपडा वा एक हीटिंग पैड राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। जबरजस्ती रहन्छ भने ध्यान दिनुहोस्।
मूड झल्किन्छ - कहिलेकाहीं तपाईं महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाईं आफ्नो दिन एक्लै बिताउन चाहानुहुन्छ अन्य दिनमा, तपाईं आनन्दित महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो सामान्य हुन्छ जबसम्म यो तपाईंको दैनिक क्रियाकलापलाई प्रभाव पार्दैन। अर्कोतर्फ, चरम मूड परिवर्तनहरू एउटा संकेत हुन सक्छ जुन केहि सही छैन। टेस्टोस्टेरोन यो कारण हुन सक्छ र यदि यो गर्छ भने, यसको साथ व्यवहार एक तस्वीर हो। यदि तपाइँ नियमित रूपमा व्यायाम गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ध्यान दिनुहुनेछ कि यसले तपाईंको मन लगभग चाँडै लिफ्टहरू ल्याउँछ। एक स्वस्थ आहार खाएर तपाईको शारीरिक स्वास्थ्यको लागि मात्र महत्वपूर्ण छैन, तर यो तपाईंको मनमा सुधार गर्न पनि उपयोगी छ। तपाईं ध्यान र योग जस्तै शान्त अभ्यासहरूमा भाग लिएर आरामको अभ्यास गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईले आफ्नो मूड स्विंगको रूपमा महसुस गर्नुभयो भने एक चिकित्सकलाई परिक्षण गर्नुहोस् तपाईको जीवनमा भर पर्दछ।
औषधीले उच्च खुराकमा प्रयोग गरिसकेपछि एक पुरुषको शुक्राणु गणनामा कमी। यदि तपाईले तपाइँको साथीलाई टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको प्रयोगको कारण गर्भवती प्राप्त गर्न समस्या भएको छ भने तपाइँ यो हार्मोन उपचार र औषधिहरू हटाउन सक्नुहुनेछ। यसको अलावा तपाईं मद्दत प्रजनन प्रविधि (एआरटी) प्रक्रिया पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि उपचार बेवास्ता हुन लाग्दछ भने, यदि तपाईसँग यौन सम्बन्ध छ वा सेक्स गर्दा यौन सम्बन्ध छ जब गर्भवती हुने गर्नुपर्दछ। स्नेह आंदोलनलाई रोक्न सक्ने स्नेहकबाट बच्न यो प्रबन्ध गर्ने एक उत्कृष्ट तरिका हो।
यदि यी सबै साइड इफेक्ट हल्का हुन्छन् भने, तिनीहरू केहि दिन वा दुई हप्ता पछि पछि उनीहरूको पछि लाग्छन्। यदि भएन भने, तपाईंको औषधकार वा डाक्टरसँग कुराकानी गर्नुहोस्।
गंभीर साइड इफेक्ट
यी गम्भीर प्रभावहरू जुन गम्भीरतापूर्वक लिन सकिन्छ। एकपटक तपाईंले यी लक्षणहरू देख्नुहुँदा एकपटक तपाईंको चिकित्सकलाई कल गर्नुहोस्। तपाईंले महसुस गर्नुहुँदा तत्काल मद्दतको लागि सोध्नुहोस् जस्तै लक्षणहरू जीवन-खतरामा छन् र यदि तपाईं सोच्नु हुन्छ कि तिनीहरू एक आपराधिक छन्। यहाँ साइड इफेक्टहरू र लक्षणहरूको लागि तपाईँले हेर्नु पर्छ;
हार्दिक आक्रमण- जान्नको लागी तपाई एकबाट पीडित हुनुहुन्छ, तपाईले निम्न कुरालाई ध्यान दिन सक्नुहुनेछ; तपाईंको माथिको शरीरमा कमजोरी, छोटो सास र सीने दुखाइ।
प्रोस्टेट ग्रैंड आकारमा वृद्धि गर्नुहोस्। यो द्वारा लक्षण गरिएको छ; मूडा खाली गर्न असक्षमता, जबरन गर्न चाहानुहुन्छ जब तपाईले पेशा गर्न चाहानुहुन्छ, कमजोर मूत्र स्ट्रिम वा एक किनेको छ र पुनरुत्थान र पीइङ सुरु गर्नमा समस्या छ। अर्को चिन्ह नटटोरिया (रातमा अधिक मूत्रिभियतको भावना) र एक अर्का र बारम्बार आवृत्तिको आवश्यकता हुन्छ।
स्ट्रोक- एक ढिलो भाषण यसलाई लक्षण र शरीरको एक पक्षमा कमजोर महसूस गर्न सक्छ।
प्रोस्टेट क्यान्सर - तपाईंको चिकित्सकले पहिले उपचार र उपचारको बेला टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको साथमा कुनै पनि प्रोस्टेट ग्राउन्ड समस्याको जाँच गर्नु पर्दछ विशेष गरी यदि तपाई पचास वर्ष वा पुरानो हो।
लिभर समस्या - यो आँखा वा छालाको ज्वरो, लम्बाइको रंगीन मूत्र भएको, भूख को कमी, असामान्य थकान, पीले रंगको मल, सामान्यतया सामान्यतया सामान्यतया सामान्यतया भन्दा राम्रो र सुर्खेत र खुट्टाको सुँगुरको कारणले गर्दा लक्षण हुन सक्छ। तपाईं पेट सुँगुर र दुखाइ, उल्टी र नली पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ।
Polycythemia- यो रातो रगत सेल गणनामा वृद्धि हुन्छ। यसको चिन्हहरू; मानसिक सतर्कता, थकितता, रक्तकोटहरू, स्ट्रोक, भ्रम, सिरदर्द र अनुहारको पुनरुत्थानमा कमी।
पुल्मनरी इम्बेलिज्म- यो फेफड़ों मा रक्तकोटहरु को गठन हो। यसको लक्षण रक्त बाहिर, खुट्टा पल्स खाँदैछ, चक्कु वा हल्का रंग लगाउने, बेग्लै, छाती असुविधा वा दुखाइ हुन्छ जुन तपाईले गहिरो सास लिनु र सांसको कमजोरीको लायक हुन्छ।
गहिरो नस थ्रोमोस्कोस- तपाईंको खुट्टामा गहिराइको रगतको गठन गहिरो रिटहरू तपाईंको खुट्टाको दुखाइ र सूजनले संकेत गर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को खुराक
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेक खुराक केहि कारकहरु द्वारा प्रभावित छ। यी हुन्;
शर्त व्यवहार गरिँदै।
शर्त कति कत्तिको छ
अन्य रोगहरू जुन तपाईं हुन सक्नुहुनेछ
शरीर कसरी पहिलो खुट्टामा प्रतिक्रिया दिन्छ
लागू औषधि र बलहरू
पहिलो टेस्टोस्टेरोन को दुई रूपहरू साइप्रियोनेट पहिलो हो जुन सामान्य फारम हो। यो 100mg / मिलीलीटर र 200mg / मिलीलीटरको शक्तिको साथ एक इंजेक्सन समाधान हो।
दोस्रो ब्रान्ड डिपो टेस्टोस्टेरोन हो जुन इंजेक्सन फारममा पनि छ। यो 100mg / मिलीलीटर र 200mg / मिलीलीटरमा उपलब्ध छ।
प्राथमिक hypogonadism को लागि डोजज
साधारण सुरूवात खुराक - डाक्टरले वर्णन गर्नाले तपाईंको निदान र उमेरमा निर्भर हुनेछ। तपाईंको आवश्यकताहरूको आधारमा एक चिकित्सकले थाहा पाउँछ कि तपाईंको लागि सबैभन्दा राम्रो खुराक छ। उनले हरेक 50-400 हप्ताको लागि 2-4 Mg को एक खुट्टाको वर्णन गर्न सक्दछ।
डोजज बढ्छ - उपचारको लागि प्रतिक्रिया, टेस्टोस्टेरोन र रक्त स्तर र साइड इफेक्टहरूको आधारमा तपाइँलाई तपाइँको डाक्टरले सल्लाह दिईएको छ।
यस दबाइको अधिकतम खुट्टा माईलगायत हरेक रातभर मा 400 मिलीग्राम इंजेक्शन हो।
बाल खुराक (12-17 वर्ष)
साधारण सुरुवात खुराक- तपाईंको चिकित्सकको निदान र उमेरको आधारमा तपाईंको बच्चाको खुट्टाको वर्णन गर्दछ। उहाँले तपाईंको आवश्यकता अनुसार एक पर्चा दिनुहुनेछ। सामान्यतया, उसले 50-400 मिलीग्राम इंजेक्शन को खुराक सिफारिस गर्न सक्छ तपाईंको सानो मा एक मांसपेशी हरेक दुई देखि चार हप्तामा।
डोजज वृद्धि- डाक्टरले तपाइँको साइड इफेक्ट, उपचारको प्रतिक्रिया र टेस्टोस्टेरोन र रक्त स्तरको आधारमा तपाईंको बच्चाको खुट्टा बढाउन निर्णय गर्न सक्छ।
तपाईंको बच्चाको मांसपेशीमा इंजेक्शनको अधिकतम मात्रा हरेक X हप्ताको लागि 400 मिलीग्राम हुनुपर्छ।
बाल खुराक (0-11 वर्ष)
बाह्र वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरुलाई यो औषधिको सुरक्षा र दक्षताको अध्ययनमा अझै अध्ययन गरिएको छैन।
हाइपोगोनडेटोट्रिक हाइपोगोनदेशन को उपचार को लागि खुराक
वयस्क खुराक (18 वर्ष र माथि)
सामान्य सुरुवात खुराक- तपाईंको डोजर तपाईंको निदान र उमेर अनुसार भिन्न हुन्छ। डाक्टरले तपाइँका आवश्यकताहरूमा आधारित खुराकमा निर्णय गर्न सक्दछ। 50-400mg इंजेक्शनको खुराक हरेक दुई देखि चार हप्तासम्म मांसपेशीमा।
डोजज बढ्छ - साइड इफेक्ट, उपचारको प्रतिक्रिया र टेस्टोस्टेरोन खूनको स्तरको आधारमा डाक्टरमा वृद्धिको लागि एक चिकित्सकले सल्लाह दिन्छ।
400 मिलीग्राम इंजेक्शन को एक अधिकतम खुराक हरेक पितृ रात्रि मा तपाईंको मांसपेशी मा।
साधारण सुरुवात खुराक - तपाईंको बच्चाको खुट्टा निदान र उनीहरूको उमेरमा निर्भर गर्दछ। डाक्टरले तपाईंको बच्चाको आवश्यकतामा आधारित निर्णय गर्दछ। सामान्यतया, हरेक 50-400 मिलीग्राम इंजेक्शन हरेक मासु 2-4 हप्ता पछि मांसपेशीमा हुनुपर्छ।
डोजज बढ्छ - तपाईंको बच्चाको खुट्टा दुबै साइड इफेक्ट्स अनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ, उपचारमा उनीहरूको प्रतिक्रिया र टेस्टोस्टेरोन खूनको स्तर।
तपाईंको बच्चाको पेशामा इंजेक्शन अधिकतम खुराक हरेक दुई हप्ताको लागि 400mg हुनुपर्छ।
यो अझै पुष्टि भएको छैन कि यो औषधि बाह्य वर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरु द्वारा प्रयोगको लागि सुरक्षित वा कुशल छ कि छैन।
यदि तपाईं यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, मांसपेशिहरु लाई एथलेटिक प्रदर्शन प्राप्त गर्न को लागी यस औषधि को 100-200 मिलीग्राम को खुराक हरेक हफ्ते पर्याप्त छ। चार हप्ता पछि, तपाईं आफ्नो शरीरमा प्राप्त परिणाम वा शरीरले लागू औषधिको प्रयोग कसरी प्रतिक्रियाको आधारमा खुसी बढाउन सक्छ।
नियमित रूप देखि, टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को अन्य स्टेरॉयड को टी-स्तर गिरने वाला प्रभावहरु लाई काउंटर गर्न प्रयोग गरिन्छ जुन व्यक्ति ले जा रहेको छ। यसका लागि प्रयोग गर्दा, टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट 200mg-400mg खुल्ला छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको चक्र
यदि तपाईं लिनुमा रुचि राख्नुहुन्छ टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट इंजेक्शन वसा र निर्माण मांसपेशिहरु शेडिंग को उद्देश्य संग आफु मा, तपाईंको चक्र यो जस्तै हुनुपर्छ:
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट साइकल साप्ताहिक 200 साप्ताहिक रूपमा साप्ताहिक 1m हुनु पर्छ साप्ताहिक। तथापि, तथापि, ध्यान दिनुहोस् कि यदि तपाइँ कुनै अन्य स्टेरॉयडसँग टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट स्ट्याक गर्दै हुनुहुन्छ भने खुट्टा परिवर्तन हुन्छ। यहाँ किन छ?
प्रत्येक स्टेरॉयडमा फरक आधा जीवन छ। तपाईंलाई केहि स्टेरियोड्स स्ट्याक गर्ने निर्णय गर्नु अघि यो विचार गर्न आवश्यक छ। साथै, स्ट्याक्किङ चक्र सुरू गर्दा तपाईं सावधानी रहनु हुन्न किनभने तपाईं थाहा छैन कि तपाइँको शरीरले एक भन्दा बढी स्टेरॉयडसँग प्रतिक्रिया गर्नेछ। समस्याहरू जोगिन निश्चित छ कि तपाइँले प्रत्येक दिनुभएको स्टेरॉइडलाई आफ्नै पहिलोमा परीक्षण गर्नुहोस्। तपाईले पनि बच्न सक्नुहुनेछ र एक समयमा एक स्टेरॉयड प्रयोग गर्नुहोस्।
चक्र थेरेपी पोस्ट गर्नुहोस्
यो थेरेपी स्टेरियोड्स आफैले लिनुको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यो कारणले, टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटको प्रयोग पछि, यो हार्मोन उत्पादन गर्न तपाईंको शरीरको क्षमता अब अवरोध छ। तपाइँ टेस्टोस्टेरोन चक्र संग गरेपछि, तपाईंको शरीर एस्ट्रोजनको साथ डूबिएको हुन सक्छ। यो कारणले गर्दा तपाईंको शरीर इंजेक्शनमा निर्भर रहेको छ यसको तर्फबाट टेस्टोस्टेरोन उत्पादन गर्न को लागी यस्तो परीक्षणले मात्र कुनै पनि उत्पादन गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट चेतावनी
यो औषधि प्रयोग गर्नु अघि, तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको शरीरमा के हुन सक्छ। यसले इमब्याक्स रोगीहरूमा हाइपरकैलक्मेमको कारण हुन सक्छ। यदि यो हुन्छ भने, तपाईंले दबाइको प्रयोग तुरुन्तै रोक्नु पर्छ।
उच्च खुराकमा यस औषधिको लामो समय सम्म प्रयोग नछोड्नुहोस् किनभने यसले जीवन-धमकाउने जटिलताहरू जस्तै पिलिएसिस हेस्प्टिस, हेट्रोसेसेलुलर कार्कोनोमा र हेपिटिक एडेनोमको कारण हुनसक्छ।
यद्यपि यो अझै पुष्टि भएको छैन, गेराट्रिक रोगीहरूले यस औषधिको प्रयोगको विरुद्धमा चेताउनी दिएका छन् किनभने यो प्रोटेट कार्कोनोमा र प्रोटेट हाइपरट्रॉफी हुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटले जुनसुकै थम्बनेलका घटनाहरू हुन सक्छ जुन सांस, एडमामा र दुखाइको चरमताले संकेत गर्दछ। यदि तपाईं यसबाट पीडित हुनुहुन्छ भने, लागू औषधि प्रयोग गरी रोक्नुहोस् र उचित स्थितिसँग सम्झौता गर्नुहोस्।
यो औषधि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि, यसले गम्भीर मनोचिकित्सा र हृदय रोगको प्रतिक्रिया हुन सक्छ। यसले एडमामाको कारणले गर्दा, यो विद्यमान हेपेट, नर्वे र हृदय रोग संग जीवनलाई धम्किलो हुन सक्छ। Gynecomastia पनि विकसित हुन सक्छ।
एक संरक्षकको रूपमा प्रयोग भएको बिनजेल शराबले ग्याँस सिन्ड्रोम जस्ता गम्भीर असर पार्दछ। कम मात्रामा, यसले तपाईंलाई असर गर्दैन। साथै, स्वस्थ पुरुषहरूको लागि जो भ्याउडाइरीको विलम्ब भएको छ भने सानो उचाइमा पीडित हुन सक्छ। यो कारणले यो हड्डीको परिपक्वतालाई असर गर्छ।
के भयो यदि म एक खुराक वा ओभरडोज छु
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट इंजेक्शन एक लामो-अन्तराल उपचार हो र यसैले, सहि बाटोमा नदिँदा गम्भीर असर पार्दछ।
यदि तपाईं दुर्व्यवहारबाट अचानक लिनु पर्दैन वा यसलाई नचाहनुहोला यो औषधि सही काम नगर्न सक्दछ। औषधिको लागी कारण सही काम गर्न को लागी, एक विशिष्ट राशि तपाईंको शरीर मा सबै समयमा हुन्छ। यदि तपाईंले यो औषधि नदिनुभयो भने, तपाईंले कम टेस्टोस्टेरोन लक्षणहरू सामना गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाइँ एक खुराक सम्झनुहुन्छ वा अनुसूची अनुसार औषधि लिन असफल भए, यसले राम्रो काम नगर्न वा पूर्ण रूपमा काम गर्न रोक्न सक्छ। यो कारणले गर्दा लागू औषधको लागि सही काम गर्न, एक निश्चित रकम सधैं शरीरमा हुनुपर्छ। तपाईंले छुटेको खुट्टाको प्रतिस्थापनको बोलीमा ओभरडोज लिनु हुँदैन। यो गम्भीर साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ। तपाईलाई तपाईंको डाक्टरलाई कल गर्न सल्लाह दिइन्छ र तपाईले अन्तिम पटक बताउनुभएको छ तपाईले टेस्टोस्टेरेरोन साइप्रियोनेट इंजेक्शन गरेको छ। उनले / तपाईले तपाईंलाई नयाँ डोजिङ कार्यक्रमको साथ सहयोग पुर्याउनेछ।
यदि तपाइँसँग टेस्टोस्टेरोन ओभरडोज छ भने तपाईंको अर्थमा यो औषधीको खतरनाक स्तर हुनेछ। यसको लक्षणहरू समावेश हुन सक्छ:
शुक्राणु गणनामा कमी
तपाईं अडिशनहरू अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ जुन सामान्य भन्दा लामो समयसम्म रहन सक्नुहुन्छ
तपाईं नियमित रूप देखि erections हुन सक्छ
Gynecomastia (स्तन को अत्यधिक वृद्धि)
इंजेक्शन साइट मा सुँगुर र दुखाइ
यदि तपाईंलाई सम्भावना छ कि तपाईंले धेरै टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट लिनुभयो भने, तपाईंको डाक्टर वा कुनै स्थानीय जहर नियन्त्रण केन्द्रलाई सल्लाह दिनुहोस्। यदि तपाईंको लक्षणहरू तीव्र हुन्छन् भने तुरुन्तै आकस्मिक कोठामा जानुहोस्।
औषधिले काम गरिरहेको छ भने कसरी थाहा पाउनुहोस् - तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंले दबाइ गर्ने काम गरिरहेको छ। तपाईंले ध्यान दिनुहुनेछ कि कम टेस्टोस्टेरोनको लक्षणहरू कम छन्।
टेस्टो साइप्रियोनेटको सावधान
टेस्टोस्टेरोनमा अन्य समस्याहरू जोगाउन, तपाइँलाई आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्न आवश्यक छ ताकि तपाईलाई बताउन सक्नुहुनेछ यदि तपाई औषधि प्रयोग गर्न उपयुक्त हुनुहुन्छ। यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् भने, तपाईं यस औषधिको राम्रो बुझ्नको लागि तपाईले तपाइँको डाक्टरबाट सधैं सोध्न सक्नुहुनेछ। टेस्टोस्टेस्टोन साइप्रियोनेट इन्जेक्शन प्राप्त गर्नु अघि तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई के भन्नु हुन्छ चीजहरू के हो?
डाक्टरलाई थाहा छ यदि तपाईं यो औषधि वा तपाईं भएको हुन सक्ने कुनै एलर्जीमा एलर्जी हुन्छ। यो महत्त्व यो हो कि ड्रगमा अन्य सक्रिय घटकहरू हुन सक्छ जुन तपाई एलर्जी हुन सक्नुहुन्छ।
डाक्टरले तपाईको मेडिकल ईतिहासको बारेमा पनि थाहा पाउनुपर्दछ जस्तै यदि तपाईं अतीतमा मधुमेहबाट निस्कनुभयो भने, निद्रा सेवन, विस्तारित प्रोस्टेट, क्यासर (प्रोस्टेट क्यान्सर, पुरुषहरूमा स्तन क्यान्सर), उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रल, गुर्दे समस्याहरू, लिभर समस्याहरू, स्ट्रोक, हृदय रोग (जस्तै हृदयघात, छातीको दुखाइ र हृदयको विफलता) र फेफड़ों र खुट्टाहरूमा रक्तकोटहरू।
यदि तपाईंसँग मधुमेह छ भने यो औषधीले तपाईंको रक्त शर्करालाई कम गर्न सक्छ। दिमागको केहि शान्तिको लागि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले तपाइँको रक्त शर्करा जाँच गर्नुहोला प्राय: निर्देशित र डाक्टर परिणाम थाहा पाउन अनुमति दिन्छ। यदि तपाईले निम्न रक्तचापको कुनै पनि संकेतहरू जस्तै टिंगिङ हात वा हातहरू, चकलेट, धुलो भएको दृष्टि, भूख, छिटो हृदयघात, हिँड्ने, वा अचानक पसीनाले तपाईंको डाक्टर तुरुन्तै सूचित गर्दछ। यो काउन्टर गर्न, तपाईंको डाक्टरले तपाईंको आहार, व्यायाम कार्यक्रम, र मधुमेह औषधिमा परिवर्तन गर्न सक्छ।
यसबाहेक, टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेटले तपाईंको कोलेस्ट्रॉललाई रक्तचापको खतरा बढाउँछ (कोरोनरी धमनी रोग) र हृदय समस्याहरू। सबैभन्दा सुरक्षित कुरा भनेको डाक्टर तपाईंको कोलेस्ट्रॉलको स्तर नजिक नदेख्ने हो।
आफ्नो चिकित्सकलाई जानकारी दिनुहोस् यदि तपाईं हिँड्न असमर्थ हुनुहुन्छ वा टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट प्रयोग गर्दा लामो समयको लागि बेड-ग्राउन्ड भयो। समस्याहरू रोक्नको लागि, तपाइँले तपाइँको रक्त क्याल्सियम स्तरको बारम्बार अवलोकन गर्नुपर्छ। यदि तपाइँ चाँडै शल्यक्रिया गरिरहनु भएको छ भने, तपाईंले त्यो क्षणमा प्रयोग गर्ने सबै औषधिहरूको बारेमा तपाईको दन्त चिकित्सक वा डाक्टरलाई सूचित गर्नु पर्दछ। यसमा सबै हर्बल उत्पादनहरू, गैर-नुस्खा र पर्चे ड्रगहरू समावेश गर्नुपर्छ।
तपाईंको सानो मा यो ड्रग प्रयोग गर्दा, धेरै सावधानी लिइन्छ किनकि यसले हड्डीको वृद्धिलाई बच्चाको वयस्क उचाइ रोक्न सक्छ। उपचारको बेला, तपाईंले आफ्नो बच्चाको हड्डीको विकास र विकासको अनुगमन गर्नुपर्छ। सावधानी पनि लिन सकिन्छ जब वृद्ध वयस्कहरू यस उपचारमा छन् किनभने तिनीहरू यसको साइड इफेक्ट जस्ता अधिक संवेदनशील हुन्छन् जस्तै हात र खुट्टाहरू, लिभर / प्रोस्टेट समस्याहरू।
उदास हुनुको दुखाइ धेरै अधिक छ, र यस औषधीले गर्भावस्थालाई असर पार्न सक्छ किनकि तपाइँ अपेक्षादार हुनुहुन्छ भने तपाईबाट टाढा बस्न सिफारिस गरिन्छ। विश्वसनीय औषधि नियन्त्रण प्रयोग गरी विचार गर्नुहोस् जस्तै यो गर्भमा हुँदा गर्भवती हुनदेखि बच्न जन्म नियन्त्रण गोलहरू वा कन्डोम। के हुन्छ यदि यो गलती देखि हुन्छ? तपाईंको डाक्टरले चाँडै यसको बारेमा थाहा पाउनुहोस्।
यो अझै पुष्टि भएन भने यो औषधि स्तन दूधबाट पारित हुन सक्छ। तथापि, यो थाहा छ कि यसले दूध उत्पादनलाई असर पार्न सक्छ जसले गर्दा नर्सिङ शिशुलाई हानिकारक बनाउँछ। कुनै पनि हानिबाट बचाउन, स्तनपान गर्दा यो लागू औषधि प्रयोग नगर्नुहोस्। स्तनपान गर्नुअघि तपाईलाई डाक्टरको सल्लाह पनि खोज्नुपर्दछ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट कसरी इंजेक्शन गर्नुहोस्
आत्म-इंजेक्शन एक कठिन कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, तर एक पटक तपाईं कसरी यो कसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईं यो तथ्यलाई सराहना गर्नुहुन्छ कि यो कुनै पनि चिन्ताको लायक छैन। अहिले सम्म तपाई आफैलाई सोध्नु हुन्छ; म कहाँ सुरु गर्छु? शांत हुनुहोस्, ढिलो र सास फेर्नुहोस्। यहाँ के गर्छ:
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट-काउन्टरको सही खुराक छ भनेर जाँच गर्नुहोस् जुन तपाईं इंजेक्शन दिन अघि यो औषधिको सही खुराक छ।
एक बाँझ, उपयुक्त सुई र सिरिगे पाउनुहोस् - टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट इंजेक्शन पाउनु; यो सल्लाह दिइएको छ कि तपाई अतीतमा प्रयोग गरिएको बाँझ सुई प्रयोग गर्नुहोला। सँधै एउटा सफा प्रयोग गर्नुहोस् र कुनै पनि समयमा तपाईं इन्जेक्शन हुनु चाहानुहुन्छ। तपाईंले जान्नु आवश्यक छ कि टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट अपेक्षाकृत तेल र चिपचिपा हो र तपाईले गर्नु पर्छ, औषधि को लागी एक मोटो सुई प्रयोग गर्नुहोस्। यो रोक्नको लागि मोटो सुई दुखाइ हुन्छ; तपाईं यसलाई एक पतले एक साथ इंजेक्शन दिन को लागी यसलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि सुई वा सिरिंज एकपटक बिसो, यो अब बाँझिएको छैन र तपाइँलाई फेंकने भन्दा अर्को विकल्प छैन।
आफ्नो हातहरू राम्रो तरिकाले सफा गर्नुहोस् र बाँझो दस्ताने राख्नुहोस् - एकदम राम्रो हात सफाईले तपाईंलाई संक्रमणबाट रोक्छ, र यदि तपाईंको दस्ताने कुनै पनि वस्तु वा सतहहरू जुन sanitized छैन भने सम्पर्कमा आउँदछ, तपाईले तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ।
दायाँ खुट्टा डराउनुहोस्- यो इन्जेक्ट हावाले बोतलमा आन्तरिक हवाको दबाव बढाउनको लागि। यसको फाइदा यो छ कि तपाईं यो द्रुतशीलता यसको मोटाई को बावजूद चाँडै नै आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई बोतललाई माथि उल्टो पार्नुहुन्छ र तपाइँलाई आवश्यक औषधिको सही खुट्टा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
अब सानो सुईमा स्विच गर्नुहोस् - आफैंलाई चरम दुखाइको विषयको लागि कुनै आवश्यक पर्दैन जब प्रक्रिया बिस्तारै पनीर रहित बनाउन तपाईं केहि गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुनिश्चित गर्न दबाइले यो गरिरहेको छैन, सुई पोइन्ट-अप राख्नुहोस्, केही हावा कोर्नुहोस् र हटाउनुहोस्। गहिरो हात प्रयोग गर्नुहोस् र पतले एक साथ बदल्नुहोस्। यो पनि बाँझ र अप्रयुक्त हुनु पर्छ।
सिरिंजको आशा - जब यो इंजेक्शनमा आउँछ, शरीरमा पुग्ने कुनै हावा बबलले गम्भीर समस्या हुन सक्छ। यो सुनिश्चित नगरेको, तपाईंलाई आचरण गर्न आवश्यक छ। तपाईले के गरिरहनुभएको छ सिरिङ सुई संग बिन्दुलाई बिन्दु गरिरहेको छ। कुनै पनि एयर बुलबुले कि सिरिन्जमा हुन सक्छ सावधानी खोज्नुहोस्। छेउबाट माथि झिक्न तिनीहरूलाई माथि जानुहोस्। एकपटक तपाईंले औषधि बुलबुला नि: शुल्क सुनिश्चित गरेपछि, एयरलाई बलियो बनाउनुहोस्। जान्न यो सबै बाहिर छ, सिरिगेको टिप बाहिर समाधान समाधानको ड्रपको लागि पर्खनुहोस्। फर्शमा स्पिलिङबाट बच्न यो गर्दा यो सावधानी लिनुहोस्।
इंजेक्शन साइट तयारी गर्नुहोस् - यो इंजेक्शन माथिको बाहिर भाग वा जांघको उच्च ब्याक क्षेत्रमा दिइएको हुनुपर्छ। यो मात्र क्षेत्रहरू होइनन् जुन इंजेक्शन इंजेक्शन हुन सक्छ, तर तिनीहरू सामान्य हुन्। क्षेत्र लुकाउन बाँझको शराब प्रयोग गर्नुहोस्। गरेर गरेर, जीवाणु तपाईंको छालामा कुनै स्थान छैन, र यसले संक्रमणहरूलाई पनि रोक्छ। रक्त वाहिकाहरु या तंत्रिकाओं को चोट ले बचने को लागि, इंजेक्शन साइट चुन्नुहोस जो ग्लुट को बाहिर को बाहिर भाग मा छ।
इंजेक्शन - कसरी टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन गर्न सोचिरहेको छ? विषाक्तित इंजेक्शन क्षेत्र भन्दा माथिको औषधि 90 डिग्री सहित सिरिगुलाई राख्नुहोस्। द्रुत रूपमा यसलाई धक्का दिनुहोस् र यसलाई थोपा खिच्नुहोस्। यदि तपाईं सिरिन्ज भित्र कुनै रगतलाई ध्यान दिनुहुन्छ भने तपाईले एक नसलाई चोट पुर्याउनुभएको छ। अर्को उपयुक्त क्षेत्र पाउनुहोस् र निरन्तर औषधि इंजेक्शन गर्नुहोस्। थोडा असुविधा वा दुखाइलाई सामान्य लाग्छ, तर यदि पीडाले यसलाई रोक्छ र तत्काल डाक्टरसँग सम्पर्क गर्दछ।
सुई बाहिर निकाल्दा एक इन्जेक्शन क्षेत्र को हेरचाह गर्नुहोस्। यो प्रभावकारी गर्न, सुईको प्रवेश बिन्दुको जाँच गर्नुहोस् र सफा कपासको बट्टा राख्नुहोस्। सबै प्रयोग गरिएका सुईहरू र सिरिन्सहरू ठीकसँग निषेध गर्नुहोस्। यदि तपाइँ कुनै असामान्य सूजन, लालीपन वा असुविधा अनुभव गर्नुहुन्छ भने तत्काल एक चिकित्सकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कसरी भण्डारण टेस्टोस्टेरोन Cypionate
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट को 20 मा 25 डिग्री सेल्सियस सम्म भण्डारण गरिनु पर्छ। यसलाई हल्का, नमी, र ताप बाट टाढा राख्नुहोस्। सबै विषाक्तता आफैं विषाक्तता रोक्न बच्चाहरु बाट टाढा राख्नुहोस्। एक चोटि औषधिको म्याद समाप्त भएपछि, यसलाई टाढाबाट फ्याँक्नुहोस्। यो दबाइलाई फ्लाइ नदिनुहोस् वा यसलाई सिंकमा राख्नुहोस् किनभने यो एक प्रदूषक हुन सक्छ।
स्टेरिओड्स पाउडर द्वारा टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट बनाउन को लागि व्यञ्जनहरु
Testosterone Cypionate बनाउन रुचि छ? यी व्यञ्जनहरूले तपाइँलाई के चाहिन्छ भनेर प्रदान गर्दछ।
1. 5mg / मिलीलीटरमा 20ml मा साइप्रियोनेट 250gram रूपान्तरण परीक्षण गर्नुहोस्
परीक्षण सीआईपी को 5Gm
बाइनल रक्सीको 1ml जुन 5% बी को बराबर छ
तिल तेलको 25 मिलीलीटर
3cc,5/ 10 सीसी सिरिगेसन
क्यान्सर बाँदर फिल्टर
पाउडरको5ग्राम वजन गर्नुहोस्
सिरियामा पाउडर राख्नुहोस्
शल्यमा बीए थप्नुहोस्
ओवनमा तेल राख्नुहोस् र यसलाई उचाल्नुहोस्। यसले यसलाई बाँझ्ने मद्दत गर्दछ। तपाईंलाई भन्दा बढि तापनि तापनि तपाईं प्यानबाट बाहिर पुग्न सक्नुहुन्छ।
तेललाई शेरमा थप्नुहोस् र पछिको लागि 2ml बचत गर्नुहोस्। तीव्र गतिमा हिलाउनुहोस्।
यदि तपाई मनपराउनुहुन्छ भने तपाईं मिक्सलाई ताप्न सक्नुहुन्छ। तपाईं यसलाई फ्राइकिङ प्यान वा स्टोवको आँखामा राख्न सक्नुहुनेछ।
18 वा 20 गेज सुई लिनुहोस् र यसलाई स्टाइलि भाइमा राख्नुहोस्। साथै, क्याम्यान बाँझिएको फिल्टर जोड्नुहोस्।
दबाब हटाउनको लागी, बाँझ शीशीमा अर्को सुई राख्नुहोस्।
एक सिरिंज प्रयोग गरेर समाधान निकाल्नुहोस् र ह्यानम फिल्टर मार्फत यो चलाउनुहोस्।
अन्य सिरिन्जमा रहेको तेलको 2ml लिनुहोस् र क्यानम्यानलाई समाधानमा चलाउनुहोस्।
2. Xypsate 10 ग्रम रूपांतरण 40 मिलीलीटर 250mg / मिलीलीटर परीक्षण गर्नुहोस्
तिल तेलको5मिलीलीटर
बेन्जिल रक्सीको 2ML = 5% बी
परीक्षण सीआईपी को 10 ग्राम
3cc र5/ 10cc सिरिगेसन
3. 60ml मा 250mg प्रति एमएल
8% बीए5मिलीलीटर
अंगूर तेलको7मिलिमिटर
Test Cypionate Powder को 15 ग्राम
4. 250 एमएल 80mg प्रति एमएल मा
अंगूर तेलको 185 मिलीलीटर
बाइनल बेन्जोजेट को 45ml
बाइनल रक्सीको 5ml
टेस्टोस्टेरोन सिपा पाउडरको 20 ग्राम
250 एमएल 200mg प्रति एमएल मा
अंगूरको बीउ तेलको 5ML
बाइनल बेन्जोजेट को 45 मिलीलीटर
टेस्टोस्टेरोन सिपा पाउडरको 50G
5. 100ml मा 250mg प्रति एमएल
अंगूरको बीउ तेलको 25 मिलीलीटर
18 एलएल बेंजिल बेनोजेट
बाइनल रक्सीको 2ml
75g टेस्टोस्टेरोन सीपी पाउडर को 25 मिलीलीटर
कसरी समाप्त गर्ने टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट कच्चा स्टेरॉयड पाउडरबाट
तपाईं स्टेरियोड्स कच्चा पाउडर खरीद गर्न र समाप्त टेस्टोस्टेरोन आफैलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी तपाईंलाई कसरी सिकाउनेछ कि टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट पाउडर कसरी बनाउने।
प्रति मिली 100 मिलीग्रामको प्रत्येक मिलिमिटर समावेश गर्दछ:
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेट पाउडर को 100 मिलीग्राम
बेंजिल बान्जेट को 1 मिलिटर
कपासको बीउ तेलको 736 मिलीग्राम
बेन्जेल शराबको 45 मिलीग्राम
एक डिजिटल मात्रा जो 0.01g मापन गर्न सक्छ
एक बाँझ सिरिन्ज फिल्टर 22um
बाँझ गिलास वाल जुन कुनै आकारको हो
कुनै आकारको सिरिंज
पहिलो चरण आवश्यक टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट वजन र यसलाई एक गिलास बेकरमा राख्नु हो। ब्यान्जेल बेन्जोजेट र ब्यान्जेल रक्सी थप्नुहोस्।
सल्विन्टहरू पाउडरलाई सिधा तुल्याउन थाले तर यदि तपाइँ प्रक्रियालाई गति दिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं पानीको स्नान प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एक प्यान वा कुनै अन्य उपयुक्त स्थानमा श्वेत साडीमा राख्नुहोस्। धेरै तातो पानी प्रयोग नगर्नुहोस् किनकी केहि उत्पादनहरु अक्सिडीज हुन सक्छ। क्यारियर तेल तपाईंले प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ समाधानको रूपमा त्यस्तै तापमानको हुनुपर्छ, त्यसैले यदि तपाईंले समाधान हटाउन निर्णय गर्नुभयो भने वाहक तेल पनि गर्म हुनुपर्छ। यो गर्ने कारण यो सुनिश्चित गर्न को लागी सबै पाउडर सल्विन्टहरुमा भंग हुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस कि समाधान मा पीछे छोडने कुनै दिखाई पाउडर छैन।
समाधानमा न्यानो कपासको बीज तेल लिनुहोस्। राम्रो तरिकाले मिश्रण गर्नुहोस् र कुनै हार्मोन swirls र यदि यो हुन्छ भने, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पानी स्नानबाट समाधान र फिल्टरिंग प्रक्रियामा प्राप्त गर्नुहोस्।
अर्को चरणले तपाइँसँग फिल्टर गर्न प्रयोग गर्ने समाधानहरू आकर्षित गर्न सिरिंज प्रयोग गर्दैछ। तपाईं ठूलो सिरिन्ज एक पटक वा सानो सेरिङ एकाधिक पटक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। 0.22 उ बाँझ सिरिंज फिल्टर अनलक गर्नुहोस् र कम साइडमा हरियो सुई धक्का दिनुहोस् र सिरिंजमा राख्नुहोस्।
स्टाइलि भाइको माथिल्लो भाग सफा गर्न एक शराब स्वाब प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा हरियो सुई घुसाउनुहोस् र सिरि फिल्टरमा क्यालमा हल्ला सुई राख्नुहोस्।
कहिलेकाहीं तपाईंले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि फिल्टर अवरुद्ध हुन सक्छ वा प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ। यस अवस्थामा, तपाईं समय बचत गर्न अर्को एक साथ फिल्टरको प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले प्रयोग गर्नुभएका स्टेरॉयड पाउडरको प्रकार र रकमले कस्तो प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ समयको निर्धारण गर्दछ।
उत्पादन स्ट्रिलेट शीअलमा उत्पादन फिल्टर गरे पछि प्रयोग गर्न तयार छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट समीक्षाहरू
के तपाईंले टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट समीक्षाहरूको बारेमा सुन्नुभयो? यो ब्रान्ड सर्वोत्तम हो र यदि तपाईंले आफ्नो दिमागलाई अझै बनाउनु भएको छैन भने, तपाइँ निम्न समीक्षाहरू पढ्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
युआन भन्छिन् "मैले यस वर्ष यो औषधि सुरू गरेपछि, मैले जिममा पर्याप्त लाभ देखेको छु। मेरो पेट अधिक देखिने छ र यसले मलाई जिमलाई अझ प्रेम गर्दछ "।
ली भन्छन् कि उनी व्यायामशालामा जाँदा कहिल्यै टायर गर्दैनन्। उनीहरु कुकुर थकित बिना हरेक कसरतको लागि जान्छन्। काम पछि हरेक दिन जिममा जान्छ र उनीहरुले जस्तै महसुस गर्दछन् सबै भन्दा ठूलो काम गर्दछ।
चेनले डाक्टरले यो निर्धारित गरेपछि 200 मिलीग्राम हरेक दुई हप्ता इंजेक्शन गरिएको छ। तिनी भन्छिन् "अब सम्म म मांसपेशिहरु प्राप्त गर्न र वजन कम गर्न मा सही बाटो मा हूँ। यस औषधिको लागि धन्यबाद, म अहिले मानिसको जस्तै महसुस गर्दछु "।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट मूल्य
अब तपाईलाई थाहा छ कि यो उत्पादन तपाईंको लागि के गर्न सक्छ, तपाई टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट मूल्य जान्न चाहानुहुन्छ। त्यसैले टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोटेन्ट खर्च कति हुन्छ? यो मात्रा मा निर्भर गर्दछ र तपाईं आफ्नो खुराक मा निर्भर गर्दछ।
यो स्थानमा आधारित फरक भण्डारहरूमा पनि फरक पर्न सक्छ।
कसरी टेस्टोस्टेरोन Cypionate अनलाइन किन्न
तपाईं माउसको क्लिक मार्फत टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ। यो सुविधा सहित धेरै लाभहरू संग आउँछ। यहाँ के गर्नु हुन्छ
AASraw.com वेबसाइट खोज्नुहोस्
शब्द "टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेट" खोज्नुहोस्।
खरिदका लागि अनुप्रयोग फाराम भर्नुहोस् र यसलाई पेश गर्नुहोस्। यसमा मात्रा र तपाईंको स्थान समावेश हुनेछ।
तपाईंले उत्पादन खरीद गर्न योग्यता निर्धारण गर्नका लागि तपाइँलाई एक सानो मेडिकल सर्भर भर्न आवश्यक हुन सक्छ। तपाइँ यसलाई छिटो भर्न सक्नुहुन्छ र पेश गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो विशेषज्ञले यसको समीक्षा गर्नेछ र सम्भवतः तपाईंको अर्डर स्वीकार गर्दछ।
एक पटक तपाईंको अर्डर स्वीकृत भएपछि, तपाइँ अब सबैभन्दा सजिलो माध्यम प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, र एक पटक पूरा भएपछि, सामानहरू तुरुन्तै पठाइन्छ। तपाईंको स्थानले ट्रांजिटमा हुने समयको मात्रा निर्धारण गर्नेछ।
वास्तवमा, यदि तपाई आफ्नो शरीर निर्माणको यात्रामा परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, यो वास्तविक सम्झौता हो। फायदेमंद नभएसम्म तपाईं यस मार्गलाई पछाडि खेद गर्नुहुन्न। अब तपाईं अर्को स्टेरॉइड खोज्न रोक्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईंले पहिले नै फेला पारेको छ जसको बजार बजारमा बेवास्ता गरिएको छ।
अधिक के छ कि तपाईं बिना वसा भण्डारण हुनको डर बिना केहि चीज खानुहुन्छ। तपाईंको शरीर परिवर्तन हुनेछ, र तपाईंले आफ्नो आदर्श शरीरको जन प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले शरीरलाई सधैं माया गर्नुभएका शरीर प्राप्त गर्न तपाईंलाई सानो प्रशिक्षण चाहिन्छ।
एक कसरत कसरत पछि तपाईंको रिकभरीको बारेमा चिन्ता पर्दैन। यो किनभने यो उत्पादन नाइट्रोजन विच्छेद र प्रोटीन संश्लेषण वृद्धि हुनेछ। साथै, तपाईं थप प्रेरणा पाउनुहुनेछ, र यदि यो तपाईंको लागि समस्या रहेको छ भने, अब तपाईसँग तपाइँको प्रशिक्षण फेरि सुरु गर्न को लागी सबै मनोभाव गर्न सक्नुहुन्छ।
टेस्टोस्टेरोन साइप्रियोनेटले तपाईंलाई अझ सुन्दर बनाउन प्रतिज्ञा गर्दैन, तर यसले तपाईंलाई शरीरका लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ जुन तपाइँले थप पदक र ट्रफीलाई जित्न मद्दत गर्नेछ।
हाम्रो उद्यममा, हामीले विभिन्न क्षेत्रका असाधारण व्यक्तिहरू रोज्यौं। व्यावसायिक अनुभव, उत्कृष्ट प्रशिक्षण, र उत्कृष्ट प्रदर्शन जो तिनीहरूसँग छन् हाम्रो सफलता पछि। एक संस्थाको रूपमा, हामी लगातार प्रशिक्षण मार्फत उनीहरूको विकास पोषण गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। हामी तिनीहरूलाई आफ्नो मनोबल, प्रतिबद्धता, र दक्षता बढाउन संचारको लागि पर्याप्त उपकरण प्रदान गर्दछौं।
हामी एक उच्च प्रतिस्पर्धी मूल्य मा राम्रो गुणवत्ता को उत्पादनहरु को पेशकश गर्छन। हाम्रा उत्पादनहरू शुद्ध छन्, र तपाइँ निश्चित हुन सक्दछ कि उनीहरूको दक्षता नबनाउने हो। यो सम्भव छ कि हामीले हाम्रा सबै उत्पादन प्रक्रियाहरूमा उत्तम उपकरण प्रयोग गर्यौं। उत्पादनको क्रममा, हामी सबै नियमहरू र गुणस्तर जाँचहरू पालन गर्दछौं भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि हामी यी उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं जसले हाम्रो ग्राहकको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ।
हामी प्रत्येक वातावरणलाई सफा राख्न को लागी प्रत्येक प्रयासलाई सुनिश्चित गर्दछौं कि हामीले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूले यसलाई नकारात्मक असर पार्दैन। अन्तमा, हाम्रा ग्राहकहरू हाम्रो रिजर्भेसन हुन्। हाम्रो ग्राहक सेवा धेरै उत्तरदायी छ र प्रत्येक ग्राहकलाई सुन्नेछ। अर्को कुराले हामीलाई अन्य सेवा प्रदायकहरूबाट छुट्याउँछ कि हामी उपभोक्ता प्रतिक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं। यो उजूरी वा सिफारिस हुनुहोस्; तपाईंको आवाज सधैं स्वागत छ।
आज हामीलाई अर्डर गर्नुहोस् र हाम्रो उत्कृष्ट सेवाहरू अनुभव गर्नुहोस्। न केवल तपाईंले आफ्नो उत्पादनहरू चाँडै प्राप्त गर्नुहुनेछ तर तिनीहरूले तपाईंको लागि काम पाउनेछन्।
Endocrinology र Metabolism को सिद्धान्त र अभ्यास, केनेथ एल बेकर पेज 1189-1893 द्वारा सम्पादन गरिएको
टेस्टोस्टेरोन: एक्शन, कमजोरी, प्रतिस्थापन, ई। निसाइलेग द्वारा संपादित, एचएम बहर एक्सएनमक्स-एक्सएनक्स
Endocrinology को विलियम्स टेक्स्टबुक, Shlomo Melmed, केनेथ एस Polonsky, पी। रीड लार्सन, हेनरी एम। Kronenberg, पृष्ठ 758-766
सनफिरमको बजारमा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स) 10 चीजहरू तपाईंलाई DMAA लिनु अघि जान्नुपर्छ
LGD-4033 (VK5211) Ligandrol पाउडर